Wararka Gudaha | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 178
Ciidamo katirsan Shisheeyaha Oo Muqdisho Lagu Weeraray.
Labo Gaari Oo Ciidamada Shisheeyaha Looga Gubay Shabeellaha hoose.
Weerar Gaari jiirsiin ah oo ka dhacay Canada iyo Dad ku dhintay.
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyaya dalka iyo dibadda, dhagayso wararka kabaxa Warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 08 03 2017.lite	Read More »
Ciidamo Kenyaati ah oo lagu dilay gobollada Jubbooyinka.
Wararka ka imaanaya gobollada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya ayaa tibaaxaya in ciidamada Kenya ay la kulmeen silsilado weeraro qaraxyo ah, kuwaas oo loogu aasay hareeraha wadooyinka ay ku safraan. Warar ay heleyso Idaacadda Al-Furqaan waxay sheegayaan in illaa Afar Qarax lagu weeraray gawaari ciidan oo dowladda Kenya ay leedahay, kuwaas oo ku safrayay deegaano dhaca xuduud beenaadka Soomaaliya iyo Kenya. ...	Read More »
Si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso wararka ka baxa Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 08 03 2017.lite	Read More »
Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada waa barnaamij habeen waliba ka baxa Al-Furqaan, waxaana lagu soo qaataa waraysi iyo falanqeyn xiiso badan. Halkan ka dahgayso Barnaamijka Dhuuxa Waraysiyada 07-03-2017 Read More »
Afhayeenka Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo waraysi gaar ah siiyay Idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay Abaaraha ku dhuftay gobollo badan oo katirsan Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay. Waraysiga Sheekha oo ahaa mid muhiim ah waxaa uu ku sheegay in Xarakada ay horeyba usoo waday howlaha gurmadka ee ay gaarsiineyso dadka Muslimiinta, hadana ...	Read More »
Si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, la soco wararka ka baxa Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War duhur 07 03 2017.lite	Read More »
Xarakada Alshabaab oo Howlgalo ka fulisay Gobalada Bari iyo Bay.
Ciidamo katirsan kuwa Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan waxay ka fuliyeen magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyo duleedka magaalada Baydhabo oo ah magaalada madaxda gobolka Baay ee Soomaaliya. Boosaaso, rag hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa bartamaha magaalada waxay ku toogteen Sarkaal dhar cad ah oo katirsanaa Sirdoonka maamulka Puntland. Ilo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Sarkaalka ...	Read More »
Si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso wararka kabaxa Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhagayso War Subax 07 03 2017.lite	Read More »
Dhageyso Dhuuxa Wareysiyada
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa war baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan, waxaa lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah oo dhinacyo kala duwan lala yeesho. 120110_001 Read More »
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Halkan ka dhagyaso War Duhur 06 03 2017.lite	Read More »
Page 178 of 342« First...150160170«176177178179180	»	190200210...Last »